Sony Xperia F8331 ga - enwe ụdị dị iche na foto ndị a | Gam akporosis
Foto ndị ahụ nke Sony Xperia F8331, nke kwesịrị ịdị Sony na-esote ọkọlọtọ afọ a, edechara ma gosipụta ụdị dị iche iche karịa ihe ejirila anyị na usoro Z, ọnwa ole na ole gara aga wepụtara maka usoro X ọhụrụ.
Sony Xperia F8331 ga-akarị Xperia X Perfomance nwere nnukwu ihuenyo ma nwee 4K ndekọ vidiyo ma n'ihu ma n'azụ ese foto. Oge mgbanwe maka ekwentị Sony nke anyị maara na asụsụ nke a gbanwere obere na afọ ndị na-adịbeghị anya.
Yabụ ọ bụ ugbu a mgbe mgbanwe ahụ gbanwere ma anyị nwere ike ịsị na ọ na-eme ya n'oge kwesịrị ekwesị, ebe enwere ọtụtụ ndị ka ha anọtụtụwo oyi N'ịgbanwe mgbanwe ahụ maka usoro X anyị ka na-anwa ịmara ebe etinye ya megide ndị ọzọ na-eme ya na ihe Z gara aga bụ.
Nhazi ahụ bụ mgbanwe kachasị maka F8331, ọ bụ ezie na ọ dịghị anya site na ama. Ugbu a n'elu na ala ụdị ndị ahụ dị mbadamba mgbe akụkụ na-curved. Na azụ igwefoto nwere ndokwa ọhụrụ na sọrọ-Ikanam flash na e nwere a panel na ala azụ na ikekwe nwere ike ime na mpi. Ọzọ imewe zuru ezu bụ na azụ anya dị ka "brushed" metal.
N'ihu ee ee anyị na-ahụ akụkụ ndị a maara nke ọma ma gụnye n’ihu stereo ọkà okwu. Akụkụ ọzọ iji gosipụta bụ ọdụ ụgbọ USB Type-C, yabụ anyị ga-eche ihu ọdụm mbụ nke ndị nrụpụta Japan ga-agụnye ụdị njikọ a. N'ebe a, anyị ga-enwe nkwupụta ụda jaket nke 3,5mm, n'adịghị ka ndị ahụ Motorola Moto Z.
Anyị amaghị ụbọchị mwepụta, mana yana ndị IFA na Septemba...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Sony » Sony Xperia F8331 gosipụtara foto ma gosipụta ụdị dị iche
Zaghachi Orlando Betancourt
Copydị nke kingzone k1 turbo
Achọpụtara na Xiaomi Redmi Rịba ama 4 ga-enwe mgbawa Helio X20 na batrị 4.100 mAh